Fampandrosoana eny ifotony: tonga ny milina mpamokatra herinaratra eny Tsihombe - ewa.mg
Fampandrosoana eny ifotony: tonga ny milina mpamokatra herinaratra eny Tsihombe
News - Fampandrosoana eny ifotony: tonga ny milina mpamokatra herinaratra eny Tsihombe
Notanterahina tao Andamboly any amin’ ny
Distrika Tsihombe, tamin’ity herinandro ity ny lanonana fanolorana
ny milina mpamokatra herinaratra lehibe. Manana tanjaka 165 kw sy
265 kw miaraka amin’ ireo jiro sy kojakoja maro ireto fitaovana
ireto. Nanolotra izany tany an-toerana ny minisitry ny Angovo sy ny
Akoranafo, Ramarolahy Christian, nisolo tena ny filohan’ ny
Repoblika. Anisan’ny nanotrona izany koa ny governoran’ ny faritra
Niavaka kosa anefa ny lahatenin’ny
depiote Masy Goulamaly fa tsy mba nahenoana na niresaka momba ireo
fitaovana vao azo ireo. Efa saika tsy tonga izy raha nandrasana
nandritra ny ora maromaro ary efa tsy anisan’ ireo nandray
fitenenana. Nandray ny anjara fitenenany taorian’izany ny
governor, saingy efa lasa nandeha ity solombavambahoaka ity.
L’article Fampandrosoana eny ifotony: tonga ny milina mpamokatra herinaratra eny Tsihombe a été récupéré chez Newsmada.
Miparitaka tao amin’ny tambajotra « Facebook » tato ho ato ny vaovao milaza fa hisy ny lalao ara-pirahalahiana hifandonan’ny Barea an’i Madagasikara sy ny Voromaherin’i Nizeria, hotanterahina any Frantsa, afaka iray volana. Namoaka fanambaràna mandiso an’io vaovao io ny Federasiona malagasin’ny taranja baolina kitra, afak’omaly. « Taranja fehezin’ny lalàna sy fitsipika ny baolina kitra. Misy ambaratonga maromaro arahina ny fikarakarana lalao iray ary tsy maintsy ankatoavin’ny rafitra ambony samihafa, toy ny Federasiona iraisam-pirenena sy ny Kaonfederasiona afrikana », araka ny fanambaràna nataon’ny FMF. Manamafy izany koa ny tsy mbola fahafahan’ny rehetra mivezivezy noho ny hamehana ara-pahasalamana maneran-tany. Na izany aza, maro ny fihaonana efa vinavinainy hotontosaina hanomana ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny CAN 2022 sy ny fiadiana ny tompondaka maneran-tany hatao any Qatar. Miantso ny mpitia baolina kitra malagasy rehetra ny Federasiona mba tsy hanaparitaka filazana samihafa, ankoatra ny vaovao ofisialy. L’article Kitra – Lalao ara-pirahalahiana :: Lavin’ny FMF ny fisian’ny lalaon’ny Barea sy Nizeria est apparu en premier sur AoRaha.
FANAFIHANA TETSY MAHAMASINA :: Voaroba sady naratra ny raim-pianakaviana iray
Naratra noho ny vono nataon’ny jiolahy ny raim-pianakaviana tao amin’ny trano iray voatafika tetsy Mahamasina, ny marainan’ny alatsinainy lasa teo. Voaroba ihany koa ny entana, toy ny finday enina, solosaina finday roa niaraka tamin’ny vola vahiny 100 euros sy 900 dollars. Ora vitsy nialoha izao fanafihana izao no efa naheno antso filazana fisiana jiolahy mihaodihaody eny Ambanin’Ampamarinana ny mpitandro filaminana. Nikasa hanafika tokantrano iray ny andian-dehilahy nitondra zava-maranitra saingy nandositra rehefa naheno feon-javatra hafahafa. Tonga teny an-toerana ihany ny mpitandro filaminana nanamafy ny fisafoana. Niveri-maina izy ireo. Naheno indray ireo mpanao fisafoana ireo, tokony ho tamin’ny efatra ora maraina fa nisy trano voatafika teny Tsimialonjafy Mahamasina. Jiolahy enina no niditra an-keriny tao amin’ity tokantrano iray sady nandroba no nandratra olona. Tsy mbola nisy tratra ireo mpanafika, araka ny vaovao heno farany omaly. Efa eo am-panaovana ny fanadihadiana kosa ny mpanao famotorana. L’article FANAFIHANA TETSY MAHAMASINA :: Voaroba sady naratra ny raim-pianakaviana iray est apparu en premier sur AoRaha.
Notapahin’ny fivoriambe ara-potoan’ny federasiona sport automobile malagasy (FSAM), ny alarobia lasa teo, tetsy amin’ny foibe toerany etsy Analakely, fa hotanterahina ny 27, ny 28, ny 29 novambra ho avy izao, raha tsy misy ny fiovana, ny “Rallye international de Madagascar” (Rim). Fihaonana, karakarain’ny federasiona sy ny klioba TMF Rallye. Mba tsy haha taona fotsy sady ho famaranana ny 2020 ny antony hanatontosana izany sady hisian’ny fifankahitan’ireo mpanamory rehetra efa mangetaheta fifaninanana.Na izany aza, tsy natao ofisialy ny hazakazaka fa ho an’ny fahafinaretana fotsiny ihany ka tsy ho anisan’ireo hakana isa ho an’ny taom-pilalaovana. Ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana sy ho fisorohana ny fitangoronan’ny olona be loatra, tsy nasiana ary nofoanana ny “Special slalom” efa fanao sy mahazatra ny TMF. “Notazomina ny anarana “Rim” fa tsy nasiam-panovana satria io ny fifaninanana manakatona hatrany ny taom-pilalaovana. Faniriana ihany izany fa hiankina betsaka amin’ny fahafahana manatanteraka fihaonana fanatanjahantena eto amin’ny firenena ihany ny ahafahana manao azy ity”, hoy Rakotofiringa Jimmy, filohan’ny federasiona.Tsiahivina fa tsy nisy ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, tamin’ity taona ity, noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19. Na teo aza izany, nahazo fankatoavana “quitus” 100%, tamin’ireo klioba mpikambana ny federasiona sport automobile malagasy. TorcelinL’article Tsy haha taona fotsy ny 2020: hotanterahina ny “Rallye international de Madagascar” a été récupéré chez Newsmada.